Uwe ejiji oyi
Nwaanyị ọ bụla chọrọ ka ọ dịrị n'elu - dị mma, na-eji eji ejiji ejiji, na-akpali mmasị! Otú ọ dị, mgbe oyi na-abịa, a na-enwekwa ajụjụ siri ike banyere otu esi eburu uwe oyi. Oge oyi, mgbe ụfọdụ, na-eme ka anyị chefuo ịma mma, ọtụtụ na-echegbu onwe ha naanị okpomọkụ. Mana n'afọ a, ihe ọ bụla ga - agbanwe: ekele nke ndị na - emepụta ihe n'oge a, nchịkọta oyi nke uwe ụmụ nwanyị na - enye nwanyi ohere ọ bụghị nanị ijiji nkasi obi, mana n'otu oge ahụ ka dị ka ihe na - egbuke egbuke!
Uwe oyi na-adọrọ adọrọ maka ụmụ agbọghọ, nke ụdị ụdị ụwa dị ka Emporio Armani, Burberry Prorsum na Emilio Pucci, na-ewepụ ọnụnọ uwe. Ụmụ nwanyị na ndị mara mma ụdị ga-ọ bụghị naanị na-ekpo ọkụ, kama ga-enyere anya 100%! Ụdị dịgasị iche iche, ọnụnọ nke ọkpụkpụ na nro nke ákwà, ihe a nile - Bottega Veneta. Uwe ejiji oyi akwa nke ndị oyi akwa bụ ihe a chọtara maka ndị na-ahọrọ ka ha nọrọ n'elu.
Uwe oyi uwe ụmụ nwanyị dị mkpa n'afọ a. Iji hụ nke a, lelee nchịkọta site Helmut Lang. Ụdị mmiri ozuzo na-ewu ewu nke onye na-ewu ewu na-ewu ewu na-adọrọ adọrọ, agaghị adịrị nwa agbọghọ ọ bụla, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ na ìgwè mmadụ ahụ ma hụ ihe mbụ - mgbe ahụ ị ga-enwe ihe ị ga-ahụ na ihe ị ga-eme.
Onye ọ bụla maara na na France, ụmụ agbọghọ na-ele anya na ejiji ma mara mma. Ya mere, ọ dị mma ịjụ otú ha si eji ejiji na Paris n'oge oyi. Paris bụ isi obodo nke ejiji ụwa, ọtụtụ n'ime ihe ngosi ndị ahụ na-eme n'ebe ahụ, n'etiti ihe ndị ọzọ ọ bụ France nke bụ ebe obibi nke ọtụtụ n'ime ndị a ma ama na ndị na-ewu ewu.
Na-ekiri ụdị ejiji na ụwa niile, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ ma ọ bụ na-emekarị ihe ọ bụla, n'agbanyeghị na ihe niile na-eme n'elu ala, na ọtụtụ ndị Europe, gụnyere French, na-eji ejiji dị mma ma dị umeala. Nke a apụtaghị na ha anaghị agbaso ụdị ejiji, ọ bụ naanị ụdị ejiji French, nke na-eme ka agụmakwụkwọ na onye nkụzi mara.
Na-ekiri otú e si ejiji na Europe n'oge oyi, ị malitere ịghọta na ezigbo ejiji na ezigbo ejiji abụghị naanị ihe anyị na-ahụ n'èzí kamakwa ihe anyị chere na n'ime. Ọdịiche ụwa, nghọta, nghọta nke ụwa bụ akụkụ nke onwe anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnọgide na nke ugbu a, anyị aghaghị ịkwalite ma nwee ọganihu ọ bụghị nanị n'èzí ma n'uche.
Otú ọ dị, ka anyị laghachi na mkparịta ụka nke ejiji ejiji na gburugburu ụwa. Na mgbakwunye na France, e nwere mba ndị ọzọ na-anwa igosi onye ha n'otu n'otu na ịkekọrịta ọhụụ maka ejiji! Were, dịka ọmụmaatụ, Finland. Umu uwe ndi nwanyi oyi oyi na Finnish adọrọ uche mgbe nile, mmeputa nke obodo a ama ama maka ogo ya. Na Finland, dị ka n'ọtụtụ mba Europe, e nwekwara ndị na-ahụ maka ihe ndị a ma ama, ndị nwee ike ịkwanyere ùgwù na ịkwanyere ùgwù n'ụwa nile. Were, dịka ọmụmaatụ, otu onye mmepụta nkà sitere na Finland Samu-Jussi Koski - na 2012 ọ meriri akara onyinye Golden Hanger dịka onye mmebe kachasị mma nke afọ. Ọ ghọrọ onye okike nke uwe ụmụ nwanyị a na-akpọ "Samuji".
Ịza ajụjụ banyere eji ejiji n'oge oyi, ndị na-emepụta Finnish na-enye ohere ile ihe ọhụrụ ha. Were, dịka ọmụmaatụ, Mirkka Metsola - otu akara nke a mụrụ n'oge na-adịbeghị anya, ma na-emepe n'otu oge ahụ ngwa ngwa na ike. Onye mmebe ahụ na-achọsi ike na mmiri na ihe ndị a na-eme n'oge a, ya mere, na ọrụ ya, ọ nwere ike ịchọta ihe na-abaghị uru ma na-awụ akpata oyi n'ahụ.
Agbara ole na ole dị mma maka esi ejiji maka oyi bụ minna, nwa agbọghọ na-eto eto Finnish nke jisiri ike mee ka agụụ ya bụrụ ihe mara ezigbo mma. E ji ọtụtụ akwụkwọ ndị na-ewu ewu mara talent na ihe mgbagwoju anya nke nwatakịrị a. A na-ebipụta ụdị uwe ya na peeji nke Elle, Cosmopolitan, Vogue, Easy Living, etc. N'afọ a, Minna na-enye ndị ọkacha mmasị ya obere mkpokọta na agba ọchịchịrị.
Nhọrọ nke uwe oyi
Ya mere, otu esi eji ejiji kwesịrị ekwesị n'oge oyi? Azịza nke ajụjụ a nwere ike ịdị iche. Uwe kwesịrị ịhọrọ dabere na ọdịdị gị, ọnọdụ ahụ ike, ọnọdụ ego na ihe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, maka ụmụ nwanyị zuru oke, enwere ụlọ ahịa ebe uwe ndị oyi na-eyi nke oké oyi na-ere. Mgbe onye na-emepụta ihe na-akwa ákwà maka ndị inyom nwere ihe ndị mara mma, onye na-emepụta ya na-echeba na ọ bụghị nanị nha ngwaahịa ahụ, kamakwa ụdị ya, nke nwanyị ahụ ga-abụ ọ bụghị nanị na ọ mara mma, kamakwa nwee ike igosi uru dị iche iche, mgbe ọ na-ezochi adịghị ike. Maka nke a, a na-ejikwa ihe ntinye, eserese, ọkpụkpụ na ọkwa nke ebe na-abaghị uru, wdg.
Na ajụjụ gbasara ejiji ejiji n'oge oyi, azịza ya ga - abụ otu ihe ahụ - gaa ụlọ ahịa pụrụ iche, mana cheta na ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ pụrụ iche maka àgwà nke ihe a zụrụ. N'oge oyi, ihu igwe na-agbanwe agbanwe, mana ọ naghị adị ọkụ. Ndị na-emepụta ndụmọdụ na-enye ndị inyom dị ime ndụmọdụ ka ha ghara ịhapụ ndị mara mma, n'ihi na ị nwere ike ịgbaso ụdị ejiji. N'afọ a bụ uwe dị mkpa, karịsịa na ntinye ọkụ na olu akwa. Na ụdị ngwaahịa a, eleghị anya ị gaghị akwapụkwa, ọ ga-elekwa anya dị ukwuu.
Uwe mkpuchi oyi akwa
Uwe ejiji bright 2015
Ụdị oge mgbụsị akwụkwọ oyi - 2017-2018 - uwe - gịnị ga - eme ka ọ dị ọhụrụ na oge ọhụrụ?
Uwe ejiji ejiji - oge oyi-oyi 2016-2017
Akara ejiji 2013
Uwe ejiji maka Mgbụsị akwụkwọ 2014
Ejiji mara mma nke uwe okpomọkụ 2013
Nnukwu nku anya
Uwe a kpara nke ọma
Ụbọchị ezumike 2015
Ejiji edozi ejiji mmiri-okpomọkụ 2013
Mpempe akwụkwọ maka aka enyi nwanyị nwanyị - otu na-ahụ maka isi na-eche ihu
Rita Ora na-ekpuchi otu n'ime osimiri dị na Malibu
Marinade maka mmiri
Cutlets - nri na-atọ ụtọ maka nri na-atọ ụtọ kwa ụbọchị na maka ezumike
Kedu ụdị mmadụ dị?
Uwe ejiji - Oge mgbụsị akwụkwọ-Winter Times 2015-2016
Hyperthyroidism na ụmụ nwanyị - mgbaàmà
Ọbara na ọnụ n'ụtụtụ - akpata
Ugwu Scottish - aha
Phytophthora na poteto - usoro mgba
Aloe na mmanụ aṅụ - Ezi ntụziaka maka afo
Kedu ka esi tụọ ala okpomọkụ?
Kedu ka esi eme aviary maka nkịta?
Kelvin Klein achọghị Kendall Jenner dị ka ihe nlereanya
Uwe isi nwanyi 2015 afo
Egwuregwu ndị na-acha odo odo - ejiji na-acha anwụrụ ọkụ na nke dị mma
Nolin - lekọta